Ogaden News Agency (ONA) – Waa Kuma Madaxwaynaha Cusub ee Puntland?
Waa Kuma Madaxwaynaha Cusub ee Puntland?
Barlamaanka Puntland ayaa madaxweynaha maamulkaasi u doortay Saciid Cabdullaahi Dani oo ku dhashay magaalada Muqdisho sanandkii 1966-dii. Madaxweyne Siciid Dani ayaa waxbarashada dugsiga dhexe iyo kan sare ku qaatay isla magaalada Muqdisho.
Wuxuu sidoo kale ka baxay jaamacadda ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan kuliyaddii luuqadaha. Wuxuu sidoo kale takhasuuskiisa kusoo qaatay dalka Malaysia, kahor inta uusan ku biirin siyaasadda.
Saciid Dani oo aan Soomaaliya ka bixin ayaa waxaa uu deegaanada Puntland ka hirgeliyay shirkado ganacasi, waxaana siyaasadda uu kusoo biiray sannadkii 2002. Saciid Cabdullaahi Dani oo kamid ahaa musharixiintii u tartamayay xilka madaxweynaha ee Soomaaliya sannadkii 2016-kii ayaa isaga iyo qoyskiisa waxay Soomaaliya ka qaxeen xiliyadii dagaalada sokeeye.
Saciid Cabdullahi Deni waxaa uu tartan culus geliyay madaxweyne Cabdiweli Cali Gaas, oo isagu hormuud ka ahaa khilaafka maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka Soomaaliya. Waxaana laga warsugayaa sida uu noqon doono xiriirkaasi maalmaha soo socda,
Doorashada Saciid Cabdullahi Deni waxay mugdi gelineysaa mustaqbalka siyaasadeed ee madaxda maamul-goboleedyada ee ku soo haray iskaashiga maamul-goboleedyada.